Zuva, Jecha uye Kufambidzana Kwemagariro paSandals Resorts
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Zuva, Jecha uye Kufambidzana Kwemagariro paSandals Resorts
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuvhuna Grenada Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Jamaica Nhau • Kuvhuna Saint Lucia Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Vanodanana Michato Honeymoons • chengetedzo • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Yakachena Sandals Grande Antigua Resort, ichipa nzvimbo yaunoda, neyakagwinya zvese-zvinosanganisira zvakavanzika zvaunoda kubva kuSandals Resorts.
Ehe, Sandals Resorts yatora matanho ekuchengetedza kune imwe nhanho. Asi tarisa kwenguva refu uye iwe uchaona kuti hunhu vafambi vanoshuvira kupfuura zvazvakambove zviri munzvimbo idzi dzekugara nguva dzese.
Nguva pfupi yapfuura pakati pehusiku, mwenje yekufambisa paAmerican Airlines ndege # 2405 yaigona kuonekwa ichidzika kuchitsuwa che Antigua. Kumhara kwendege kuVC Bird International Airport kwakatakura kukosha kwakanyanya pahusiku uhu terevhizheni yemuno yakaratidza chiitiko. Matthew Cornall, General maneja we Shangu Grande Antigua, aive pakati peavo vaitarisa.
"Zvakaoma kuisa mumazwi manzwiro," anodaro Cornall, uyo anga aunganidza vazhinji vechikwata chake vakatenderedza TV. "Pandakatarisa tarisa, ndakaona misodzi mumaziso avo."
Kuuya kwendege yekutengesa kwaireva kuti Sandals Grande Antigua yaizove yekutanga ye 15 Sandals Zvese-zvinosanganisira Resorts kuvhurazve vafambi kubvira COVID-19 yakamanikidza hupfumi hwenyika kuvhara pasi pakati paKurume. Ukapihwa panoramic maonero epfuma, haungamboziva kuti yakavharwa. Mukunyarara kwemasvondo gumi apfuura, vashandi vakachengetedza kugadziriswa kwemvura uye madziva mune avo Instagram poses - inogara iri mamiriro ekugadzirira, zvakafanana neboka revashanyi.
Dzimba dzepamahombekombe dzakashongedzwa mujecha dzinoitira nzvimbo yakanaka yekumhara yegungwa
"Muri kuzvinzwa here?" Cornall anobvunza nezve manzwi ari kumashure. “Kuseka nekuimba? Ndovo vatichagara tiri. Tiri chikwata uye… ini handidi kuwedzeredza izvi… isu tiri mhuri chaizvo. ”
Iyo nharaunda haina kujairika uye inodziya. Zvakajairika seyakajairika, zvichipiwa masiki ekudzivirira uye magirovhosi anopfekwa nenhengo dzechikwata, zviyeuchidzo zvemusoro wenyaya uyo unoti: "Kufamba hakuzombove kwakafanana." Chokwadi. Iwe haugone kukona kona pane chero Sandals resort usingapfuure ruoko-sanitizer dispenser kana kuona mumwe munhu achipukuta pasi pekubata mapoinzi ese maminetsi gumi nemashanu kusvika makumi matatu, kunyangwe iwo mapoinzi abatwa kana kwete.
Asi usati wadzika mukati me "zvisati zvamboitika," Cornall anoda kusimbisa chimwe chinhu chakakosha pazvinhu zvese zveSandals:
"Kwatiri, zvimwe zvinhu zvichagara zvakangofanana."
Iyo Sandals Grande Antigua resort iri padanho refu reDickenson Bay rakareba jecha jecha.
Cornall anofamba kupfuura nakare kose. Anoti "Mangwanani ... Mangwanani akanaka Mangwanani akanaka" apo achipfuura nhengo dzechikwata; vazhinji vane basa rekuchenesa macomputer emhepo nguva dzese nguva vashanyi pavanobva pa suite uye vachishandisa mwenje mutema pane zvivakwa kuti vaone kuti hapana kusakwana kusarasika.
Anomira parifiti ndokubvumira vanhu vaviri kuti vatore rwendo rwunotevera. "Mumwe murume nemukadzi panguva," anodaro zvine mutsindo. Paanosvika paburiro rechitatu, anokwira kumhara uye anomira zvakare.
"Ndinofunga isu tese takadzidza kuti tisanyanye kumhanyisa uye nekuziva zvakatipoteredza," anodaro.
Yakavakirwa kudanana uye kutandara, iyo Mediterranean Village Pool ingori imwe ye6 inotora madziva emvura yakachena kuSandals Grande Antigua uye kumba kuSandals 'iconic yekushambira-kumusoro kwedziva bar.
Kubva paanomira, maziso ako anogona kutevera vaviri vaviri vachifamba munzira yekuwedzera-yakafara yekuenda kudziva rine ruzha uye kupfuura ipapo kune rakakwana bhuruu bhuru uye kunyangwe bhuruu gungwa. Yese inosanganisirwa muchinzvimbo chinoshamisa zvisingaite. Maonero pachawo akangoita sezvaagara ari, asi maonero anogona "kusambove akafanana" nekuti haasi munhu wese anoshuva nzvimbo kupfuura nakare kose?
"Mwedzi mitanhatu yapfuura, vakaroorana vaimbomira pano voti 'ooh' uye 'aah' kwehafu yenguva," anodaro Cornall. “Zvino yave maminitsi mashanu. Vanongotarisa vofemera mukati mese. ”
Inzwa mhepo yemugungwa yeCaribbean kubva pabhokisi rako rega rakatarisana negungwa rakanaka paSandals Grande Antigua.
Nemashoko iwayo akamutsa pamwe kunetsekana kwakanyanya kune vafambi: kufema wakashandisa mweya. Izvo zvinofanirwa kutsanangura kuti nei vaviri vakaroorana mushure meumwe vanomira munzvimbo dzakadai. Kubvumira zuva reCaribbean kuti ribvise kunetseka. Mhepo dzese dzekutengesa dzinoparadzanisa chero zvasara. Kutora nguva yekufema.
"Kutaura chokwadi, ndainzwa ndakachengeteka panzvimbo yekutandarira kupfuura zvandinoita mutaundi rangu," anodaro Joanna Baumann, uyo akaenda ku Shangu Grande Antigua nemurume wake, Andrew, munaJune kupemberera zuva ravo remuchato. "Vashandi vakatiita kuti tinzwe takachengetedzwa kupfuura nakare kose, asi panguva imwecheteyo hatina kurasikirwa nesandals vibe iyoyo."
Maonero akavhurika, pfungwa dzakavhurika, uye nzvimbo dzakashama hadzisi dzezvakangoitika pavharanda renhurikidzwa yechitatu mu Antigua. Izvo ichokwadi apa zvakare ichokwadi apo vakaroorana vanofema mamaira chiuru mamaira, nzira yese kuenda kuchitsuwa chemusha cheSandals che Jamaika.
Idzo dzerudo Sandals South Coast Pamusoro-iyo-Mvura Bungalows, yakakwana kune yega uye yekuvanda.
Iyo refu swath jecha ichitenderedza divi rekumadokero kweSandals South Coast muJamaica ichiri kutonhorera pasi petsoka na8: 30am Yakasarudzika semahombekombe, masutu emvura pamusoro pekupera kwebhodhi refu nzira inoonekwa-asi-kure mwedzi. Hazvigoneke kutaura kana paine munhu ari kunze uko, uko mhepo yegungwa inoyerera pamusoro pekunze ichinyorova matabhu uye pakupedzisira ichipinda munzvimbo dzekudyira dzekunze padyo nemahombekombe. Aya "anogara ari mazita" - kuvharirwa, mhepo, mhepo inopisa - zvakangofanana nekuuraya hutachiona semitemo yakasimba inoonekwa mubhuku rakakora Sandals 'Platinum Protocol dzeUtsanana.
Sechikamu cheSandals Platinum Protocol yeUtsanana, nhengo dzese dzechikwata dzinopfeka zvinodzivirira kumeso uye dzinogona kuoneka dzichinyemwerera kuburikidza nemeso adziya.
"Takatsaurira zvikwata zvekutarisa panzvimbo imwe neimwe inotevedzera zvakanyanyisa kutungamira kubva kuvashandi vezvokurapa, maCenters for Diseases Control and Prevention (CDC), World Health Organisation (WHO), uye maMinistries ehutano munyika dzese dzatinoti musha, "Anodaro Sandals Resorts 'Muvambi uye Sachigaro, Gordon" Butch "Stewart.
Shangu dzakagara dzichiteedzera kune epamusoro maitiro ehutsanana uye ekuchengetedza maprotocol, uye ikozvino nematanho ekuwedzera panzvimbo, vashanyi vanogona kuve nerunyararo rwepfungwa pavanonakidzwa nerudo rwavo rwekutiza muCaribbean.
Pakati pemazana eruzivo: Mvura iri mumadziva inotariswa awa yega yega. Nzvimbo yega yega - inobata masuo kune vanoita kofi - inoongororwa kanokwana katatu pazuva. Zvigaro nematafura emabhawa anodhonzwa kure kure kure. Dhidhi giya rinobva rakachengetwa mune sanitization mhinduro. Kupfapfaidza uye kupukuta kuri kuenderera, sekuvapo kweye nhema rambi.
Asi pamwe iyo inoshanda kwazvo "protocol" ndiyo yakagara irimo kwemakumi emakore:
“Kuzvipira kwedu kudanana. Kwatiri kwagara kwakafanana nekuvharana… humbozha… zvakavanzika ”Stewart akaenderera mberi.
Dzimba dzepamahombekombe dzakashongedzwa mujecha dzinoitira nzvimbo yakanaka yekumhara yegungwa.
Vakaroorana vanonakidzwa nemahombekombe emumahombekombe, nekuti rudo rwakagara rwuchida kuvanzika uye kuvharirwa - pfungwa yekuti Sandals Resorts yakavakira zita rayo kubva pakutanga chaipo.
Rimwe izwi rinouya mundangariro: Kufambidzana munharaunda. Tarisa zvakare ku pamusoro pemvura dzimba, ndega pamusoro peGungwa reCaribbean. Kana iyo Rondoval Suites akaparadzaniswa pamhenderekedzo yegungwa mu St. Lucia. Kana skypool suites inosvikika chete nemhepo-inopepereka feather mukati Grenada. "Kufambidzana munharaunda" kunogona kuve kutsva kumutauro wezuva nezuva, asi hachisi chinhu chitsva pane idzi nzvimbo dzekutandarira.
Sandals Grenada Skypool suite, yakazvimiririra zvekuti kuona kunoshamisa uye kushambira zvinongova kure kure bhokoni rako.
"Chaizvoizvo, hatina kumbonzwa kunge tiri muboka revaSandals," anodaro Baumann. “Zvakasarudzika sekuda kwedu, asi izvozvi zvava padanho rakasiyana chose. Vakaisa pfungwa zhinji mukusiya zvese kunze, uye izvo zvakaita kuti tigadzikane nezve kuchengetedzeka iwo miniti yatasvika. "Uye zvikaita senge nzvimbo yekutandarira yaive yedu yese."
Pfungwa dzinodaidzwa kuti idzva, kunyangwe dzakanyanya, muSandals 'yekutsvaga iyo yekupedzisira kudanana chiitiko zvino zvionekwe sezvakanaka. Private infinity-kumucheto madziva. Private machubhu pane verandas. Private mu-suite mabara. Pamabhishi mamaira maviri mamaira, vakaroorana vanogona kutora acre yejecha kuti varambe vari kure. Sarudzo dzekuisa akawanda semakumi mashanu emadziva epachivande, anosvika manomwe manomwe akawedzera madziva makuru, uye gumi nematanhatu Restaurants pane imwe hofori chivakwa hachina kumbove nekuda kwekukwezva vanhu Ndikwo kuvaderedza.Shangu-Royal-
Svetukira chaimo muSandals Royal Barbados Royal Rondoval Butler Suite; kutiza kworudo kunouya nedziva rayo rakavanzika uye runyararo rwoumbozha rwuchinyorovesa tubu mbiri.
Dzimwe nguva, mumwe munhu anoonekwa: Mudiri. Kune vakaroorana mune suite yakadaro, mudiri ndiye chete munhu anobata - vachishandisa magurovhosi machena. Izvo izvo vashanyi vasingacherechedze ndezvekuti mumwe nemumwe mudiri, uye nhengo yega yega yechikwata, vanopinda nemarongero matsva ezuva nezuva pavanosvika pane chivakwa. Pane cheki yekushisa, chinosungirwa kuchinja mbatya, uye "bhutsu yekushambidza" kuchenesa uye kuuraya utachiona shangu.
Kuva anotsvedza-kuchena kunopfuura kupfuura kwevashandi uye mune ese maeni masuti, futi. Ndiyo imwe yekumira-uye-kutora-iyo-munguva. Iyo micheka yakapfava ichangobva kupiswa, chiteshi che sanitizer chakazadzwa, imba yekugezera ine utachiona nezvigadzirwa zvemuchipatara. Yese nuance, kubva pamubhedha wedhiraira kusvika pakutsvedza musuwo weveranda, yakapasa bvunzo.
“Zvino, kunyange mabhodhoro e Appleton Estate Siginecha Blend uye Robert Mondavi Mapatya Oaks vari kupenya, ”anodaro Cornall.
Sandals Grande Antigua, uko kuvanzika kwagara kuri chinhu chakasarudzika, uye jecha jena uye mvura ye-turquoise zvakaenzana.
Pese paifamba Joanna naAndrew Baumann kuenda kuresitorendi kana kumahombekombe, vaitarisa-tarisa nekuterera. Tichitora, sekutaura kwaJoanna, "zvakajairika zveSandals vibe zvatavinga." Kana paine chero chinhu, iyo vibe yakanyanya. Hazvinzvengeki. Uye-ngatitendekei titaure izwi - zvinotapukira. Iko rusununguko rwekufema uye kufamba uye kunwa mune yakasarudzika mamiriro ndeye fantastically inotapukira. Tora kubva kune avo vanga vari pakati pekutanga kudzoka: Zvakafanana nakare, uye pamwe pamwe zviri nani kupfuura nakare kose.
Munyori, Robert Stephens, murume wemakore makumi maviri + & baba vevanasikana; Zvinokosheswa naRobert zvemhuri, nharaunda & mapfupi stints semudiri, gadhi gadhi, & crepe "chef" paSandals inogadzira mafambiro ake uye kunyora maonero.